GPS Gf-07 – Rocket Online Shopping
Home ShopSpyGPS Gf-07
GPS Gf-07 quantity
Category: Spy.	Tags: 4G, gps, အသံဖမ္း.
? GF-07 စွယ်စုံသုံး ထောက်လှမ်းရေးကိရိယာ
?ဈေးနှုန်း ↔ 27000ကျပ်
တစ်နေရာမှ အသံကို နားထောင်ချင်နေပါသလား၊ တစ်ယောက်ယောက် ပြန်မလာလို. စိတ်မချဘူးလား
တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ. အခြေအနေကို အလုံးစုံ သိလိုပါသလား။
Rocket မှ စွယ်စုံသုံး ထောက်လှမ်းရေး ကိရိယာကို ရောင်းပေးနေပြီနော်။
? အသံခိုးနားထောင်ခြင်း၊ အသံဖမ်းထားခြင်း၊ တည်နေရာကိုပြခိုင်းခြင်း၊ အသံကြားလျှင် ဖုန်းပြန်ခေါ်ပေးခြင်း တို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်
? ? အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်မှာ ရှင်းပြပေးထားပါတယ် ခင်ဗျာ
? Facebook Chat Box
(ပေ့ချ် ထိပ်တွင်ရှိသော Message ဆိုတာကိုနှိပ်၍) (သို့)
⚺ Viber (09264686461)
? 09768484878 ( Phone & Viber )
? စက်ထဲကို GSM ဖုန်းကဒ်၊ Memory ကဒ် ထည့်ပြီး အိမ်၊
ရုံး၊ ကျောင်း၊ ကုမ္ပဏီ၊ ကလေးလွယ်အိတ်၊ လူကြီးပိုက်ဆံအိတ်၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ် တို့မှာ လျှို့ဝှက်စွာ ထည့်ပေးလိုက်ပြီး အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ကိုယ့်ဖုန်းကနေ စုံစမ်းသိရှိနိုင်ပါတယ်၊၊
? ဖုန်းလှမ်းခေါ်ပြီး တိုက်ရိုက်အသံနားထောင်လို့ ရပါတယ်။ ဖုန်းမခေါ်ဘဲ အသံဖမ်းခိုင်းထားလို့လည်း ရပါတယ်၊၊ ဘယ်ရောက်နေလဲ တည်နေရာပြခိုင်းလို့လည်း ရပါတယ်၊၊ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ရဲ့အရေးကြီးနေရာများမှာ တစ်စုံတစ်ခုအသံကြားတာနဲ့ ကိုယ့်ဖုန်းကို လှမ်းခေါ်ခိုင်းခြင်းစနစ်များကိုလည်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်၊၊
? စက်ထဲက ဖုန်းကဒ်နံပါတ်ကို ကိုယ့်ဖုန်းနဲ့ ခေါ်လိုက်တာနဲ့ ပေ(30)ပတ်လည် စက်အနီးတဝိုက် ပြောနေတဲ့ အသံများကို ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ကြားရမှာပါ။
ဖုန်းခေါ်လိုက်လို့ တစ်ဖက်လူသိသွားမှာကိုလည်း စိုးရိမ်စရာမလိုပါ၊၊ ဖုန်းဝင်လာရင် မည်သည့်အချက်ပြစနစ်မှ မပြဘဲ Auto ဖုန်းကိုင်ပေးမှာပါ၊၊ စက်ထားထားတဲ့နေရာက ဖုန်းလိုင်းမိနေလျှင် ကမ္ဘာလုံးဖုန်းလိုင်းမိတဲ့ ဘယ်နေရာကနေပဲဖြစ်ဖြစ် ဖုန်းခေါ်ပြီး အသံနားထောင်ခြင်း၊ မက်ဆေ့ချ်ပို့ခိုင်းစေခြင်း တို့ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
? အရွယ်အစားသေးငယ်ပြီး ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ သံစားပွဲ စတဲ့ သံထည်တစ်ခုခုမှာ ကပ်ထားခဲ့နိုင်ဖို့ ကာဗာအတွင်းမှာ သံလိုက်ပါရှိပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
? မက်ဆေ့ချ်ပို့ စေခိုင်းရန် ကုဒ်များမှာ
000 ↔ မိမိဖုန်းဖြင့်ချည်နှောင်ချိတ်ဆက် ကန့်သတ်ခြင်း
444 ↔ လုပ်ဆောင်ဆဲအလုပ်ကို ရပ်ခိုင်းခြင်း
445 ↔ မမ်မိုရီကဒ်ထဲမှ အချက်အလက်များ ဖျက်ခိုင်းခြင်း
555 ↔ အသံဖမ်းယူခြင်း
666 ↔ အသံကြားလျှင် ဖုန်းခေါ်ခိုင်းခြင်း
888 ↔ စက်အကြောင်း အခြေအနေ တင်ပြခိုင်းခြင်း
999 ↔ စက်ကို Restart ချခိုင်းခြင်း
♼ 000 = Start Binding
ပထမဦးဆုံး စက်ထဲကဖုန်းနံပါတ်ကို ကိုယ့်ဖုန်းနဲ့ 000 လို့ မက်ဆေ့ချ်ပို့ပါ။ Set;Binding +9592595×××× လို့ မက်ဆေ့ချ်ပြန်ပို့ပါမယ်။ (ဥပမာနံပါတ်ပါ) အဲ့ဒီ့လိုပို့လာမှသာ နောက်ထပ် ခိုင်းစေချက်တွေ လုပ်ဆောင်နိုင်မှာပါ။ 000 မက်ဆေ့ချ်ပို့မထားပဲ ဖုန်းခေါ်ခြင်း၊ စေခိုင်းခြင်း လုံးဝလုပ်လို့မရပါ။ 000 ဆိုသည်မှာ ကိုယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကို မှတ်သားချည်နှောင်ချိတ်ဆက် ကန့်သတ်လိုက်ခြင်း၊ ကိုယ့်ဖုန်းနဲ့သာ စေခိုင်းနိုင်ခြင်း ကိုဆိုလိုပါတယ်
♷ 555 = Record
စက်ထားခဲ့တဲ့နေရာက အသံတွေကို ဖုန်းနဲ့ တိုက်ရိုက်နားမထောင်ပဲ အသံဖမ်း Record သိမ်းဆည်းထားစေချင်တယ်ဆိုရင် 555 မက်ဆေ့ချ်ပို့လိုက်ပါ။ စက်ထဲက Memory ကဒ်ထဲ သိမ်းဆည်းပေးထားပါလိမ့်မယ်။ စက်နားပြန်ရောက်မှ Memory ကဒ်ကိုဖြုတ်ပြီး နားထောင်လို့ ရပါပြီ။ ( ကိုယ်မတက်နိုင်တဲ့ အစည်းအဝေးတစ်ခုအတွက် ဒီလိုနည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။)
♶ 444 = Stop , 445 = Format
555 ပို့ပြီးအသံဖမ်းခိုင်းထားတာကို ရပ်စေချင်တဲ့အချိန်ရောက်ရင် 444 မက်ဆေ့ချ်ပို့လိုက်ပါ။ ဒီနေရာမှာ တစ်ခုမှတ်ထားရမှာက အသံကြားရင် ဖုန်းခေါ်ခိုင်းခြင်း ရပ်စေချင်ရင်လည်း 444 မက်ဆေ့ချ်ပဲ ပို့ရမှာပါ၊၊ တကယ်လို့ ကဒ်ထဲက အသံဖိုင်တွေကို အဝေးကနေပဲ လှမ်းဖျက်ချင်ရင် 445 မက်ဆေ့ချ်ပို့ပါ။ Format ချပေးပါလိမ့်မယ်။
♸ 666 = Voice sensor call back
? အိမ်ထဲကို တစ်ယောက်ယောက်ဝင်လာရင် သိနိုင်အောင်၊ ရုံးမှာ အစည်းအဝေးရှိရင် အစည်းအဝေးခန်းထဲ စကားပြောလိုက်တာနဲ့ သိရအောင်၊ ကားထဲ တစ်ယောက်ယောက် ဝင်ကလိရင် သိရအောင်၊ ကိုယ့်လျှို့ဝှက်ခန်းထဲ တစ်ယောက်ယောက်ဝင်မွှေရင် သိရအောင် 666 မက်ဆေ့ချ်ပို့ထားလိုက်ပါ။ စက်ဘေးပတ်လည် 40db အသံ (သာမန်စကားပြောသံ)လောက်ကြားတာနဲ့ ကိုယ့်ဖုန်းကို လှမ်းခေါ်ပါလိမ့်မယ်။ ဖုန်းကိုင်ပြီး ဘာတွေပြောနေလဲ ဘယ်သူ့အသံလဲဆိုတာ သိနိုင်ပါမယ်။
☻ တကယ်လို့ အသံတိတ်သူခိုးဝင်လာချိန် ကိုယ်ကအပြင်ရောက်နေရင် သိရအောင် Mini Alarm ဆိုတဲ့ IR ALARM စက်လေး တပ်ထားလိုက်ပါ။ Mini Alarm အကြောင်းကို အောက်ကလင့်မှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်၊၊ Mini Alarm နဲ့ GF-07 တွဲသုံးလိုက်ရင်တော့ အတိုင်းထက်အလွန်ပါပဲ။
♺ 888 = Conditions
စက်ကလိုင်းမိ မမိ ? ဘတ္ထရီအား ဘယ်လောက်ကျန်သေးလဲ ? Memory ကဒ် ပြည့်နေပြီလား ? သိချင်ရင် 888 မက်ဆေ့ချ်ပို့လိုက်ပါ။ တစ်မိနစ်မကြာခင်အတွင်း အခြေအနေ အကျိုးအကြောင်း အားလုံးကို မက်ဆေ့ချ်နဲ့ အကြောင်းပြန်ပေးပါလိမ့်မယ်။
♺ 999 = Factory Reset
စက်ကို လျှောက်ကလိမိလို့ နဂိုမူရင်း စက်ရုံထုတ်အတိုင်းပြန်ဖြစ်ချင်လျှင် 999 မက်ဆေ့ချ်ပို့လိုက်ပါ။ စက်ရုံကစထုတ်လိုက်တဲ့ Setting အတိုင်းပြန်ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
?တစ်ကြိမ်အားသွင်းထားပြီး ရံဖန်ရံခါလောက်သာ အသုံးပြုမယ် လိုင်းမိတဲ့နေရာမှာထား အသုံးပြုမယ်
ဆိုရင် Standby 10 ရက်လောက်ခံပါတယ်။ အလုပ်ဆက်တိုက်ခိုင်းမယ် ဆိုရင်တော့ အသုံးပြုတဲ့အပေါ်မူပြီး အားခံပါမယ် ခင်ဗျာ။
? ဈေးလဲမကြီးတော့ စမ်းသုံးကြည့်ပြီးရင် လွယ်ကူရိုးရှင်းပြီး အသုံးဝင်ကြောင်း သိလာပါလိမ့်မယ် ခင်ဗျာ၊၊
? အကယ်၍ ယခုမဝယ်ချင်သေးလို့ နောင်တစ်ချိန်လိုအပ်လို့ ဝယ်ချင်လျှင် ဤ Post လေးကိုခက်ခက်ခဲခဲ လိုက်မရှာရအောင် #Shareလုပ်ထားလိုက်လျှင် မိမိ wall မှာ သိမ်းဆည်းပြီးသား ဖြစ်သွားမှာပါ၊၊ မိမိမိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းများထဲမှ လိုအပ်သူများကိုလည်း ကူညီရာ ရောက်ပါတယ်ခင်ဗျာ ၊၊
? ကျွန်တော်တို့ Rocket Online Shopping မှ ပစ္စည်းများသည် ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် သေချာစမ်းသပ်ပြီးအဆင်ပြေမှ ရောင်းပေးတာဖြစ်လို့ ပစ္စည်းတွေကိုစိတ်ချယုံကြည်စွာ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ၊၊
? အားပေးကြသော မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ အကယ်၍အဆင်မပြေမှုများရှိရင် ကျွန်တော်တို့ Rocket Online Shopping Chat Box (သို့) 09264686461 သို့ ဆက်သွယ်ပြောကြားနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ၊၊ အဆင်ပြေရင်တော့ မိမိတို့ရဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေကို ကျေးဇူးပြု၍ ပြောပြပေးပါခင်ဗျာ၊၊
အားပေးကြတဲ့ ညီကိုမောင်နှမမိတ်ဆွေများ အားလုံးကို
Rocket Online Shopping မှ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
?ဈေးနှုန်း ↔ 27000 ကျပ်
? အသံခိုးနားထောင်ခြင်း၊ အသံဖမ်းထားခြင်း၊ အသံကြားလျှင် ဖုန်းပြန်ခေါ်ပေးခြင်း တို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်
?? အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်မှာ ရှင်းပြပေးထားပါတယ် ခင်ဗျာ
? Rocket Online Shopping ဆိုင်လိပ်စာ
အားပေးကြတဲ့ ညီကိုမောင်နှမမိတ်ဆွေများ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Be the first to review “GPS Gf-07” Cancel reply
James Bond Watch Camera
Camera, Men, Recorder, Security, Spy, Technology
T193 Spy Pen
Camera, Mobile Phone Accessories, Security, Spy
Wireless Charger Hidden Camera Ks58,500.00 Ks48,500.00
Dry Ball Ks1,500.00 Ks300.00
Wireless Doorbell Ring Alarm Camera(တီး...တောင် ကင်မရာ) Ks90,000.00 Ks42,000.00
Grinder (အမွုန့္ျကိတ္စက္) Ks33,000.00 Ks10,000.00